सर्वाेच्चमा देउवासहित १४६ सांसदको रिटमा सुनुवाइ सुरु, 'टी ब्रेक' अगाडि के-के भयो ?
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा आजबाट मूल विषयवस्तुमा बहस सुरु भएको छ। दुई दिनसम्म स्थगित भएको सुनुवाइ आजबाट नियमति भएको हो । अब इजलास गठनका विषयमा विवाद नहुने भएको...
माधव नेपालले जोगाए दुई प्रदेशमा माओवादीको सरकार : एमालेकै कति सुरक्षित ?
एमाले र माओवादी विभाजन भएपछि केन्द्र सरकारमा देखिएको संकटको बाछिटा प्रदेश सरकारहरूमा प्रष्टै देखिइरहेका छन् । वाम गठबन्धनसहित चुनावमा होमिएका यी दुई पार्टी अलग भए सँगसँगै सत्तारुढ नेकपा एमालेमा देखिएको विवा...
नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार गरेको पार्टी एकता प्रस्ताव र शर्त अस्वीकार गरेको छ। सोमबार दिनभरको छलफल र नेताहरुको राय लिएपछि साँझ विज्ञप्ति निकालेर नेपा...
ओलीको घोषणाले एक होला एमाले? यसो भन्छन् नेपाल पक्षीय नेता
नेकपा एमालेमा देखिएको विवाद सुल्झाउन पटक पटक भएका वार्ता विफल भए। गत जेठ २ गते कार्यदल बनाएर गरिएको वार्ताबाट पनि कुरो मिल्न सकेन। फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमालेमै फर्काइदिएका केपी शर्मा ओली त...